Manaova ati-doha! mandinika ny iray amin'ireo lalao piozila tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Indraindray ao amin'ny magazay fampiharana Google dia mahita diamondra tena izy ianao amin'ny endrika fampiharana sy lalao video. Ary anio aho te-hitondra anao amin'ny iray amin'ireo perla mahagaga, ny anarany? Atidiho izany!.
Ity rafitra ity dia mampiasa rafitra fizika tsy mampino mba hahafinaritra anao manenjika ny atidohanao amin'ny faran'izay feno hamahana ireo ankamantatra atahorana anao. Tsy misy resaka intsony, avelako ho anao tanteraka famakafakana video an'ny Brain It On, lalao izay hahagaga anao.
1 Brain It On, ny lalao ankamantatra tsara indrindra ho an'ny telefaona Android
2 Manaova ati-doha! Izy io dia manana fomba multiplayer ho anao manaikitra amin'ny namanao
3 Sintomy ny Brain It On ho an'ny fitaovana Android
Brain It On, ny lalao ankamantatra tsara indrindra ho an'ny telefaona Android
Araka ny efa hitanao tao amin'ny Brain It On famerenana horonantsary, ny interface ny lalao dia tena tsotra, mamela anao hanitsy masontsivana vitsivitsy alohan'ny handraisana fepetra hamahana ny piozila. Famolavolana tsotra sy manintona izay manasa anao hamoaka ny mety rehetra aroson'ity lalao ity.
Tiako ny Puzzles. Ary izany, araka ny hitanao, dia ratsy be amin'ny famahana ity karazana piozila ity aho. Fa ny tena nanintona ahy indrindra momba ny Brain It On dia ny rafitr'izy ireo fizika. Ary izany ve ny lalao dia maneho ny fizika tena izy, manao ny hetsika izay zavatra samihafa hita manerana ny haavon'ny. Ny manala ny satrokanao amin'ity lafiny ity. Tena tsotra ny mekanisma lalao: Ny Bran It On dia mamboly fanamby maromaro izay tsy maintsy resenao amin'ny ambaratonga an-jatony maro izay atolotrao.
Ankoatry ny fanatratrarana ireo tanjona ireo, ohatra ny fanaovana tarehimarika mandalo teboka iray eo amin'ny efijery, ny lalao dia manome antsika fetra sy isa betsaka indrindra hanatanterahana ny tanjona. Raha mahavita ny ambaratonga isika amin'ny fanatanterahana ny tanjona rehetra, dia hahazo kintana telo isika. Raha sendra mamorona zavatra betsaka kokoa noho ny navela isika na raha mihoatra ny fetr'andro dia tsy hitovy ny haavon'ny fa ho very kintana iray amin'ireo tanjona tsy tratra.
Ny tiako holazaina amin'izany: raha mahafeno ny haavony isika dia hahazo kintana. Raha manatanteraka azy ao anatin'ny fotoana voafaritra ihany koa isika dia hahazo kintana hafa bebe kokoa. Ary raha mampiasa ny isan'ny tarehimarika natsangana ho an'ny ambaratonga lasa isika dia hahazo kintana fahatelo. Mora ve?
Ok, raha afaka mandalo ny ambaratonga aho nefa tsy manisy kajy ny ora sy ny isan'ny zavatra noforonina, inona no ilana ny kintana amiko? Eny, hamaha ny ambaratonga taty aoriana, ary antenaiko fa mila kintana marobe ianao hamaha ny Ambaratonga 200 izay manisa ...
Manaova ati-doha! Izy io dia manana fomba multiplayer ho anao manaikitra amin'ny namanao
Fahagagana mahafinaritra hafa hitako Brain It On dia manana maodely marobe, Azonao atao ny manaikitra amin'ny mpiara-miasa aminao mba hahalalanao hoe iza no mandalo piozila bebe kokoa. Andininy iray manome fiainana fanampiny ilaina amin'ny lalao.
Raha sendra mijanona ianao dia aza manahy, inona avy amin'ny Brain It On dia manome anao ny fahitana ny vahaolana amin'ny piozila tsirairay izy ireo ho takalon'ny mahita doka ianao. Tsy azonao atao ny manafoana ilay fampandrenesana na tsy hampianatra anao ny fomba hahalavorary ny haavony izy ireo.
Ary tokony homarihina fa Maimaimpoana ny ati-doha. Amin'izany no ahitanao ny ambaratonga X rehetra hisehoan'ny doka, fa ny tena marina dia tsy manelingelina mihitsy ny fanaovana doka. Raha tianao ny lalao, azonao atao ny mividy ny ambaratonga rehetra amin'ny 3.50 euro, vidiny mirary tokoa, indrindra raha jerena ny ora nilalaovan'ny Brain It On! Hanome anay, iray amin'ireo lalao ankamantatra indrindra ho an'ny Android .
Ho fanampin'izany, ireo mpampiasa izay mividy ny lalao dia ho afaka hiditra amin'ny maody fanovana ary hamorona efijery tsy manam-petra, hanitatra ny fiainana ilaina amin'ny lalao saika tsy misy fetra. Hoy aho, lalao mahagaga ary tsy afaka tsy hahita ianao raha tianao ny lalao ankamantatra.
Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ny atidoha?
Sintomy ny Brain It On ho an'ny fitaovana Android
Brain izany! - Physics Puzzles
Developer: Lalao sivy orbital
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Manaova ati-doha! mamakafaka iray amin'ireo lalao piozila tsara indrindra ho an'ny Android izahay